Hydrofacial Fekitori | China Hydrofacial Vagadziri uye Vatengesi
Hydra Oxygen Dermabrasion Chiso chemuchina nekuongorora kweganda
Iyo yakangwara chando yebhuruu ganda manejimendi sisitimu ndeye kuunganidza kumeso kweganda tsananguro mifananidzo kuburikidza nemamirioni gumi pixel yakakwira-tsananguro diki-renji kamera inosanganiswa neatatu-anotarisisa imaging tekinoroji, kuburikidza nehungwaru kuongororwa uye kuongororwa kweyakagadzirwa njere yepamoyo injini, 8 dhayidhi zvinhu zvakanaka kuti uone matambudziko eganda, uye zvinoenderana neongororo yezvakavanzika zveyakavanzika chirongwa chekuchengetedza runako uye kurudziro yakangwara yezvigadzirwa zvehunyanzvi zvekuchengetedza ganda; Yakasanganiswa nematekinoroji e "ultrasonic foshoro banga", "bubble", "ultrasonic wave", "goridhe radio frequency", "kugadzirwa kwechando" uye zvichingodaro, iyo mitanhatu yepamusoro yekugadzirisa runako mabasa anonzwisisa kubata ganda, sanganisa mhedzisiro yeAI kuongororwa kweganda nemishonga yekuchengetedza ganda uye zvimwe zvinhu zvekuchengetedza ganda, uye kugadzira mufti-inoshanda yakasanganiswa michina yekuonekwa kweganda uye manejimendi.
Dermabrasion Hydra Chiso Mashini Yekunaka Salon
Mutsva wechitanhatu mu1 kumeso ganda rekuchengetedza muchina unoshandisa h2 o2 jenareta inoita kuti mvura yakanatswa ive hydrogen uye okisijeni ions mvura, pamusoro peganda rinogona kuburitsa H2 mamorekuru, kuitira kuti mamorekuru emvura maseru akurumidze kupinda mukati meganda. Saka kuti uwane iko kugadziridzwa kweganda uye kuchenesa, ipa iwe nyowani kumeso!
Nekugadzira yekutsvaira kubvisa, micro mweya matubvu akasanganiswa neanovaka muviri svikiro, kuburikidza neyakagadzirirwa dhizaini tip inoshanda zvakananga paganda, iyo inogona kuchengeta iyo diki mabhuru kubata ganda kwenguva yakareba, peel nekuzora maseru akafa pane epamusoro peganda matanda . Iine iyo yekutsvaira yekubvisa, madiki mabhuru anogona kubvisa chero tsvina uye yakafa ganda zvidimbu mavanga, mabara, zvinopa zvinogara zvekudya kune iro ganda, zvinoita ganda riwedzere hunyoro uye kutsetseka.its inozivikanwa zvikuru kurapwa kwekunaka salon.
4 Muna 1 Yekutanga Korea Aqua Chiso Muchina
Aqua kumeso muchina unoshandisa mapombi kugadzira mvura kuburikidza nemubhobho kuti ikonzere denda mumhanyisa, neiyo nzira yekutenderera kukwirisa iyo epidermis, kuora kwekukwegura maseru eganda kunodonha. Kuzvipira-kupora basa kuchaita kuti ganda rikurumidze kumutsiridzwa, panguva imwechete, rinosimudzira ganda rekukura rukoko oxygen uye neropa kutenderera. Kumhanyisa kukura kwetishu, kusimudzira collagen, kugadzirwa kweelastin, ganda rinova nyoro uye rakapfava, rakasununguka uye rinopenya.
3 Muna 1 Oxygen Chiso Hutano Huganda Machine
Chii chinonzi CO2 oxygen?
CO2 okisijeni inotora kurudziro yayo kubva kune chaiwo masosi matsime anozivikanwa nekukanganisa ganda oxygen. Nekufananidza chiitiko ichi, co2oxygen inokonzeresa mhinduro yemuviri iyo inotumira oxygen kunzvimbo yakarapwa. Panguva imwecheteyo co2oxygen exfoliates ganda uye inogadzira yakanakira nharaunda yekuzadzwa kwezvakakosha zvinovaka muviri panguva uye mushure mekurapa. Iko kugona kuturikidzana Radio Frequency inokonzeresa collagen uye elastin kumutsiridzwa mune dermis layer, iyo inotungamira kune yakatsetseka uye yakasimba ganda uye kudzikiswa mumitsara yakanaka uye kuunyana.
Kupenya Ganda O + multifunctional Okisijeni kumeso runako muchina
Hydrofacial & oxygen jet kumeso muchina unoshandisa okisijeni pasi pekumanikidza kwakanyanya uye mvura, inotora madonhwe emvura madiki, kuburikidza nespray-mhando kuita paganda. Inogona kupinda muzvinhu zvinovaka muviri kusvika pores uye kutsemuka kweganda kubva kune epidermis kusvika kune dermis layer, zvobva zvasimudzira kuberekwazve kwemasero, nekukurumidza uye nekupa zvakananga hupfumi hwakakora paganda. Panguva imwe chete, inogona kujekesa tsvina yakadzika muepidermis. Oxygen yekumanikidza kwakanyanya uye zvinovaka muviri mvura inogona kumutsidzira kuberekwazve kwefibre tishu mu dermis, kuita maseru metabolism. Kuti uvandudze ganda rakasviba, yero, tora mhedzisiro yekubvisa kuunyana, kugadziridza kweganda uye nezvimwe.
9 in1 Hydro Chiso cheDhaimondi Peel Machine
Multifunctional Hydro kumeso muchina unoshandisa vhoriyamu yekutsvaira modhi inodzorwa nehungwaru maitiro, kuburikidza nekubatanidzwa kwezvigadzirwa nemidziyo, yakadzika kuchenesa ganda uye pores pane horny, acne, matema uye zvimwe zvisina kuchena munguva pfupi pfupi yenguva. Uye kugadzirisa kunonoka kwakadzika kwezvinovaka zvigadzirwa, kusimudzira pores kuomesa, kutsetseka ganda, kuwedzera ganda hunyoro, uye ita kuti ganda rako riite, kunyorovesa uye kunaka kwemavara.
Hydrofacial inokodzera mhando dzese dzeganda, hapana inopinda, Hapana kuvhiyiwa, hapana nguva yekuzorora, ipa ganda rako rine hutano kubva mukati nekunze.
Mufananidzo wehunyanzvi wemakiriniki nezve HydraDermabrasion, iyo inozivikanwa-inodiwa kumeso kuwana uye kuchengetedza hutano, ndiyo chete nzira inosanganisa kuchenesa, exfoliation, kubvisa, hydration uye antioxidant dziviriro zvese mune imwe. Natsiridza makwinya, mitsetse yematehwe, matema & acne.